Dib u eegista Spocket: WooCommerce Dropshipping oo ay la socdaan alaab-qeybiyeyaal US/EU | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Dib u eegista Spocket: WooCommerce Dropshipping oo ay la socdaan alaab-qeybiyeyaal US/EU
Dib u eegista Spocket: WooCommerce Dropshipping oo ay la socdaan alaab-qeybiyeyaal US/EU
Shaacinta: Duqa WP waa goob dib u eegis xirfad leh oo magdhow ka hela shirkadaha aan dib u eegis ku samayno alaabtooda. Badeeco kasta si fiican ayaa loo tijaabiyay fikradaheena daacadda ah waxaa loo wadaagaa si guud. Anaga si madax banaan ayaanu u leenahay, fikradaha hoos ku qoranna waa annaga.
Ma waxaad raadineysaa qaab aad ku abuurto dukaanka daadinta ee WordPress iyo WooCommerce?
Dib u eegista Spocket-ka, waxaan ku siin doonaa eegno aaladda freemium oo kaa caawin karta inaad dejiso dukaanka daadinta ee WooCommerce.
Waxa ugu gaarka ah ee ku saabsan Spocket waa taas, si ka duwan wax badan oo kale oo WooCommerce ah oo lagu daadiyo oo kugu xira AliExpress, Spocket wuxuu diiradda saarayaa isku xirka alaab-qeybiyeyaasha ku yaal Mareykanka ama Yurub.
Aragtida habkaas ayaa ah inaad awood u yeelan doonto inaad si dhakhso leh ugu soo dejiso macaamiishaada marka la barbar dhigo xalalka kale ee laga soo raro Shiinaha.
Sii wad akhrinta dib u eegista Spocket-ka si aad u aragto dhammaan sifooyinka iyo fiirsashada gacmaha sida ay wax walba u shaqeeyaan.
Dib-u-eegis Spocket: Muxuu Qalabkani Qabaa
Marka hore, mid ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee ku saabsan Spocket waa shabakadda alaab-qeybiyaha. Horaan ayaan kuu sheegay in intooda badan ay ku yaalaan US/EU*, laakiin sidoo kale dhamaantood waxaa hubiyay Spocket ka hor inta aan lagu darin database-ka. Markaa waad helaysaa curatay alaab-qeybiyeyaal og inaad doonaysid in aad daadiso.
* Dhammaan alaab-qeybiyeyaasha ma joogaan US/EU. Tusaale ahaan, waxaan ka helay Hong Kong. Goobaha dhamaantood si cad ayaa loo calaamadeeyay, si kastaba ha ahaatee, waxaadna si fudud u shaandhayn kartaa meelo gaar ah.
Wixii intaas ka baxsan, Spocket waxa ay sahlaysaa in alaab-qeybiyeyaashaas laga soo dejiyo bakhaarka WooCommerce. Waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya badhanka, Spocket-na wuxuu maamuli doonaa haynta alaabada si isku mid ah si aanad si lama filaan ah ugu iibin alaabada kaydka ah.
Ugu dambeyntiina, mar haddii amarada qaar laga soo rogo dukaanka WooCommerce, Spocket sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad maareyso fulinta amarka adigoo gujinaya badhanka. Ma jiraan kharashyo horudhac ah - kaliya waxaad bixinaysaa buuxinta ka dib markii aad mar hore ka heshay dalabka WooCommerce (gacantana ku hay lacagta caddaanka ah).
Adigoo isticmaalaya "guji badhanka" laba jeer qoraalka kore, waa inaad heshaa fikradda ah in hadafka halkan uu yahay in la sameeyo dejintaada daadinta mid fudud oo la hagaajiyay intii suurtagal ah.
Spocket waxay bixisaa qorshayaasha bilaashka ah iyo kuwa qaaliga ah labadaba.
Qorshaha bilaashka ah, waxaad heli kartaa ilaa 25 alaabooyin gaar ah iyo dalabyo aan xadidnayn. Markaa haddii aad leedahay dukaan aad u yar, taasi waxay noqon kartaa waxa kaliya ee aad u baahan tahay.
Taas ka dib, waxaa jira laba qorshe oo premium:
Pro - $49/bishii ama $348/sanad ilaa 250 alaab
Empire - $99/bishii ama $948/sanad alaabta aan xadidnayn
Labada qorshe ee lacag bixinta ah waxay sidoo kale ku siinayaan fursad aad ku hesho qaansheegad sumadeysan iyo alaabooyin qaali ah, kuwaas oo aan laga heli karin heerka bilaashka ah.
Qaybta gacanta lagu hayo ee dib u eegista Spocket-ka, waxaan horay u diyaariyay dukaanka aasaasiga ah ee WooCommerce. Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida ay tahay in la sameeyo oo loo isticmaalo Spocket for WooCommerce.
Markaad rakibto oo aad ka shaqeysiiso plugin Spocket-ka bilaashka ah ee WordPress.org, waxaad tagi kartaa Settings → Spocket ilaa Ku xidh Spocket oo dhame habka dejinta:
Markaa, waxaad u baahan doontaa inaad siiso Spocket gelitaanka dukaankaaga WooCommerce API. Ogolaanshahan ayaa lagama maarmaan u ah Spocket si uu u maamulo agabka iyo buuxinta:
Kadib, waxaad aadi kartaa dashboardka dashboardka ee Spocket Cloud, halkaas oo Spocket uu horay kuugu sameeyay akoon adiga oo isticmaalaya iimaylka maamulka WordPress.
Raadinta Alaabooyinka La soo dejiyo
Si aad u hesho alaabo aad rabto inaad ku shubto, waxaad isticmaali doontaa interneedka shabakada Spocket.
Xagga sare, waxaad helaysaa doorashooyin aad ku baadho/shaandhayso:
Waxaad sidoo kale ka daalacan kartaa ururinta la soo koobay ee hoos ku qoran:
Tusaale ahaan, aan sheegno inaad rabto inaad iibiso kiisaska telefoonka. Raadinta "iPhone case" waxay soo celinaysaa taraqyo badan.
Kiis kasta, waxaad arki kartaa:
Qiimaha dhabta ah
Qiimaha tafaariiqda lagu taliyay
Haddii aad rabto inaad aragto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabta, waxaad riixi kartaa si aad u furto popup leh faahfaahin dheeraad ah.
Halkan, waxaad arki kartaa:
Waqtiga rarida iyo qiimaha meelo kala duwan
Kala duwanaansho alaabta
Waxa kale oo aad dalban kartaa muunado alaabta si aad naftaada u tijaabiso. Iyo, haddii aad jeceshahay waxaad aragto, waxaad sidoo kale u soo dhoofsan kartaa badeeco dukaankaaga. Isagoo ka hadlaya…
U soo dejinta Alaabta Dukaankaaga
Si aad alaab ugu soo dejiso dukaankaaga, waxaad gujin kartaa Ku dar liiska soo dejinta badhanka mid ka mid ah bogga raadinta ugu weyn, ama soo-baxa alaabta gaarka ah.
Markaad ku darto alaabada qaar, waxaad aadi kartaa kaaga Liiska soo dejinta si loo tafatiro tafaasiisha alaabta (haddii loo baahdo).
Waxaad si qurux badan u tafatir kartaa wax walba oo ku saabsan alaabta, ilaa sawirka alt text.
Tusaale ahaan, Product tab wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ka beddesho magaca, qaybta WooCommerce (oo loo yaqaan "Ururinta), tags, iwm.:
Iyo Lahjadaha tab wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakamayso dhammaan noocyada kala duwan, oo ay ku jiraan qiimaha kala duwanaansho kasta. Spocket wuxuu kaloo si cad u qeexayaa waxa dhabta ah ee ku kacaya:
Marka aad dhammayso samaynta isbeddelada, waxaad riixi kartaa Ku riix bakhaarka badhanka si aad alaabta ugu dirto dukaanka WooCommerce.
Kadib, alaabtaada waxay ku soo muuqan doonaan sida caadiga ah Products tab gudaha WooCommerce:
Waxa kale oo aad awoodi doontaa inaad ka aragto alaabtaada firfircoon ee ka Liiska alaabta aagga Spocket:
Spocket wuxuu si toos ah u wanaajin doonaa alaabada Markaa haddii alaabtu ka baxdo alaab-qeybiyahaaga, Spocket ayaa ka dhigi doonta kaydka dukaankaaga si aadan u iibin alaab aan kaydka ahayn.
Halkaa marka ay marayso, wax walbaa waxay u dhacaan sidii adigoo dukaan caadi ah wada. Taasi waa, dukaamaystayaashu waxay iibsan doonaan alaabtaada daadinta si la mid ah alaabada kale ee WooCommerce.
Tusaale ahaan, waa kan waxa bogga badeecada ee alaabta Spocket uu u eg yahay mawduuca hore ee dukaanka:
Maareynta Awaamiirta iyo Fulinta
Mar uu qof ka dalbado dukaanka WooCommerce, waxaad heli doontaa lacagta isla markaaba sababtoo ah waxay isticmaashaa nidaamka lacag bixinta WooCommerce ee caadiga ah.
Hadda, waxaad u baahan tahay inaad ku buuxiso alaabta adoo isticmaalaya alaab-qeybiyahaaga daadinta, kaas oo Spocket ka dhigaya mid aad u fudud.
Halkan, waxaad ka arki kartaa dalabka kiis taleefan gudaha dashboardkayga WooCommerce:
Markaa, isla dalabkaas ayaa ka muuqan doona dashboardkaaga Spocket:
Laga soo bilaabo halkaas, waxaad riixi kartaa Baadhid si loo fuliyo amarka. Spocket wuxuu si toos ah u xisaabin doonaa rarida iyo canshuuraha iyadoo lagu saleynayo macluumaadka macaamiishaada, waxaadna ku bixin doontaa kaarka deyntaada.
Spocket sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto qoraalada gaarka ah, iyo Spocket wuxuu sidoo kale u gudbin doonaa qoraal kasta oo macaamilka uga tagay WooCommerce alaab-qeybiyeyaal
Isku soo wada duuboo, waxay ku saabsan tahay sida loo habeeyey inta aad heli karto - wax badan oo aad sameyso waa xaqiiji faahfaahinta oo guji badhan.
Sahaminta Goobaha kale ee Spocket-ka
Marka laga soo tago meelaha aan kor ku tusay, Spocket waxa kale oo uu leeyahay mid gaar ah Settings aagga aad u habeyn karto qaar ka mid ah cilladaha xisaabtaada.
Halkan, waxaad ku habeyn kartaa:
Dalabka tooska ah – ku dar kaarka deynta si aad u buuxiso.
Qaansheegad sumadaysan – ku dar summadaada iyo macluumaadka qaan-sheegga.
Xeerarka Qiimaha Caalamiga ah - dejiso boqolkiiba, dhufasho, ama calaamadayn go'an si si toos ah loo codsado. Waxa kale oo aad si toos ah u samayn kartaa qiimayaasha $X.99, ama waxaad ku dabaqi kartaa calaamado kala duwan noocyada kala duwan ee qiimaha.
Tusaale ahaan, waa kan waxa Xeerarka Qiimaha Caalamiga ah aaggu wuxuu u eg yahay:
Fikradaha ugu dambeeya ee Spocket
Guud ahaan, Spocket wuxuu ka dhigayaa runtii mid fudud in la bilaabo daadinta WooCommerce.
Interface si fiican ayaa loo qaabeeyey, wax walbana waxay si habsami leh ugu shaqeeyeen waayo-aragnimadayda. Tusaale ahaan, markii aan isku dhejiyay alaabada Spocket ilaa WooCommerce, isla markiiba way soo baxeen, iyo markii aan sameeyay dalab tijaabo ah WooCommerce, waxay sidoo kale si dhakhso ah uga soo muuqatay Spocket interface.
Sababtoo ah sida Spocket u maamulo alaab-qeybiyeyaasha, ma heli doontid xulashada alaabta ceyriinka ah ee aad ku heli lahayd plugin AliExpress dropshipping, qiimaha alaab-qeybiyeyaashana waxay u muuqdaan inay xoogaa ka sarreeyaan wixii aan ku arkay AliExpress.
Laakin isla mar ahaantaana, waxa kale oo aad gelaysaa alaab-qeybiyeyaal maxalli ah, markaa habka buuxinta ayaa aad u dhaqso badan. Intaa waxaa dheer, tayada badeecada guud waxay u muuqataa inay ka sarreyso AliExpress. Taasi waa, waxaa yar ku dhex mushaaxidda alaabta qashinka ah (sida AliExpress), iyo sawirada alaabadu waxay ka tayo sarreeyaan celceliska alaabtaada AliExpress.
Isku soo wada duuboo, haddii aad jeceshahay habka Spocket ee alaab-qeybiyeyaasha daadinta, waxaan u maleynayaa in nidaamka intiisa kale uu qabanayo shaqo aad u wanaagsan oo ka dhigista daadinta WooCommerce sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
6 Bedelka Yoast SEO ee ugu Fiican Goobaha WordPress
10 shay oo xisaabaadka Meme ay ku saxan yihiin suuqgeynta Instagram